Waa maxay su'aalaha waxaa lagu weydiin doonaa in aan imtixaanka dhalashada? | USAHello
Ma waxaad isku diyaarinta imtixaanka dhalashada aad? Ogow waxa su'aalo lagu weydiiyo inaad doonaa wareysi dhalashada aad. Isku diyaari su'aalaha oo dhan si aad u gudbin kartaa imtixaanka dhalashada aad.
Wareysi imtixaanka dhalashada wuxuu leeyahay 3 noocyada kala duwan ee su'aalaha:
Qaar ka mid ah su'aalaha aad ku saabsan
Qaar ka mid ah su'aalaha aad tijaabiso akhriska iyo qoraalka
Qaar ka mid ah su'aalaha tijaabiyo aqoonta Maraykanka of America
Oo kulli intaas oo nooc oo su'aalo ayaa sidoo kale jirrabaya xirfadaha Ingiriisi, sidaas darteed isku day in aad si cad u jawaabi. Isticmaal erayo muujinaya inaad fahamto su'aasha.
Ka hor inta aadan u gasho qolka waraysiga
Marka la gaaro waqtiga ballantaada, Sarkaalka USCIS ka soo bixi doonaan inay qolka sugitaanka si aad u hesho. Sarkaalka u yeedhi doonaa magacaaga iyo markaas naftiisa ama nafteeda soo bandhigo. Sarkaalka ku weydiin karaan inaad, “Sidee tahay?” Inkasta oo aanay ahayn imtixaanka rasmiga ah aad weli, Sarkaalka waxa ay mar horeba jirrabaya aad xirfadaha luqadda Ingiriisiga. Sidaas waxaad u baahan doontaa in la yidhaahdo wax u eg, “waan ladanahay, mahadsanid. Sidee tahay?” Markaas waxaad raaci doonaa sarkaalka qolka dhalashada waraysiga.
Su'aasha ugu horeysay ee imtixaanka dhalashada aad
dhammaan su'aalaha aad wareysi dhab ahaan la mid ah sida su'aalo qof kasta oo kale ee ma noqon doono. Laakiin su'aasha koowaad had iyo jeer isku mid noqon doona. Ka hor inta aadan xitaa fadhiisan, Sarkaalka USCIS aad weydiin doonaa yaboohay yabooh run ah in uu runta sheego. Isaga ama iyada ayaa ku odhan doonaa,, “Ma waxaad ku dhaartaan ama xaqiijinayaa in hadalada idin siin doonaa maanta uu noqon doonaa runta, runta oo dhan, iyo Runta mooyaane?”
Waa in aad ka jawaabto, “Waan sameeyaa.”
Su'aalaha adiga kugu saabsan
Inta lagu jiro imtixaanka dhalashada, Sarkaalka la hubiyo in samaynta macluumaadkaaga yahay run iyo sax. Isaga ama iyada ayaa ku weydiin doona in badan oo su'aalo ku saabsan macluumaadka ku saabsan codsigaaga (Form N-400).
Sarkaalka ayaa ku weydiin doonaa ah oo ku saabsan asalka. Isaga ama iyada ayaa sidoo kale su'aalo ahaayeen weydiisan kartaa ma foomka codsiga.
Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah su'aalaha laga yaabaa in lagu weydiiyo inaad:
Ma waxaad dibadda u safray tan iyo markii aad foomka aad buuxisay?
Ayaa aad waligaa guursaday hor? Ma lagu furay?
Weligaa ma dembi? Ma leedahay diiwaan dambi?
Maxaa ururada aad ka tirsan tahay?
Ma waxaad ku dhaartaan inay daacad u yihiin Maraykanka? (Ma idiin Yaboohi in ay muwaaddin fiican?)
Waligaa shaqeeyay ciidamada? Haddii aad looga baahan yahay in ay u adeegaan in ciidamada by qabyada ah, Miyaad adigu?
Ha illoobin! Sarkaalka ayaa la imtixaami aad Ingiriisi waqti isku mid ah. si cad u jawaab oo muujinaya in aad fahamto. Haddii aadan fahmin, waa okay in la yidhaahdo, “Waan ka xumahay - aad ku celin doonaa su'aasha, fadlan?”
Marka su'aalaha ay dhammaadaan, Sarkaalka ayaa ku weydiin doonaa inaad saxiixdo warqadaha isagu ama iyadu buuxisay.
Su'aalaha in aad tijaabiso xirfadaha akhriska
Sarkaalka ayaa ku tusi doona xukun inuu wax akhriyo. Haddii aad si sax ah u akhri, aad ka gudubto imtixaanka akhriska. Haddii aad hesho qalad, waxaad ka heli doontaa laba isku day more at reading xukun. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay si aad u hesho hal su'aal reading midig oo ka mid ahaa saddex isku day.
The reading liiska erayada kaa caawin doona inaad wax ka barato qayb reading Ingiriisi ah imtixaanka dhalashada ee Waxa ay muujinaysaa in erayada lagu weydiin doonaa in aad ka akhrisan.
Su'aalaha in aad tijaabiso xirfadaha qoraalka
Waxaa jiri doona qayb ka mid ah qoraal gaaban oo imtixaanka muwaadinimada kaas oo tijaabin doonaa xirfadaha qoraalka. Sarkaalka wuxuu kuu sheegi doonaa xukunka ah in la qoro. Haddii si sax ah waxaad u qori, aad ka gudubto imtixaanka oo qoraal ah. Haddii aad hesho qalad, waxaad ka heli doontaa laba isku day dheeraad ah oo qoraal ah xukun. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay si ay u qoraan mid xaq xukunka saxda ah si ay u gudubto imtixaanka oo qoraal ah.
The Liiska erayo qoraal ah kaa caawin doona inaad wax ka barato for English qayb qoraal imtixaanka jinsiyadda ah. Waxa ay muujinaysaa in erayada lagu weydiin doonaa inaad si ay u qoraan.
Su'aalaha ku saabsan Maraykanka
Waxaad sidoo kale yeelan doonaan in ay qaataan imtixaanka ku saabsan taariikhda Maraykanka iyo dawladda, iyo cilmiga bulshada. Inta lagu jiro imtixaanka this, waa in aad ka jawaabto 6 ka mid ah 10 su'aalaha si sax ah oo ku saabsan USA. Su'aalaha iyo jawaabaha waa lagu hadlo. Sarkaalka wuxuu kuu sheegi doonaa haddii jawaabtaadu tahay mid sax ah ama aan. Marka aad jawaabay 6 su'aalaha si sax ah, Sarkaal ka joojin doonto su'aalo waydiinaya oo aad u sheegto in aad maray qayb ka mid ah imtixaanka.
Waa kan liiska 100 su'aalo rasmi ah aad kala soo bixi kartaa. Sarkaalka safaree 10 su'aalo ka mid ah liiska. Qaar ka mid ah jawaabaha, sida magaca madaxweynaha, waxaa laga yaabaa in la beddelo markii aad qaadato imtixaankaaga. Waxa kale oo aad sameyn kartaa in maqlina 100 Su'aalaha iyo Jawaabaha ee wax lagu qoro oo ka uscis.gov. Ama aad awoodid iyaga akhriyey luqado kale.
Daawo video ah oo ku saabsan wareysiga jinsiyadda USCIS
Fahmaan N400 su'aalo
fasalka dhalashada online Free
su'aalaha imtixaanka cilmiga bulshada oo ku qoran luqaddaada